बालेन्द्र शाह: युथ आईकनदेखि चुनावमा आँधीबेहरी ल्याउँदासम्मको यात्रा ! - Laltin Media
Home»राष्ट्रिय»बालेन्द्र शाह: युथ आईकनदेखि चुनावमा आँधीबेहरी ल्याउँदासम्मको यात्रा !
बालेन्द्र शाह: युथ आईकनदेखि चुनावमा आँधीबेहरी ल्याउँदासम्मको यात्रा !
By लाल्टिन डट कम May 21, 2022 Updated: May 21, 2022 No Comments5 Mins Read
अहिले निकै चर्चा र कौतुहलताको विषय बनेको राजधानी शहर काठमाडौँको भोट गन्ने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म भोट गन्दा बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन दशौँ हजार भोटले अगाडि छन् । यसरी, उनले ठूला भनाउँदा पार्टीहरुका उम्मेदवारलाई पछार्दा लाखौँ युवाहरु उत्साहित छन् । साथै, उनले यो काम गर्न कसरी सफल भए भन्ने जिज्ञासा राख्नेहरुको समुह पनि ठूलै छ । यसमा धेरै विश्लेषकहरुको आ-आफ्ना तर्क-वितर्क छन् । षडयन्त्र सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने विश्लेषकले पनि यसलाई महा-आश्चर्यको रुपमा हेर्दै मनगणन्ते आंकलनहरु गरिरहेका छन् । सरसर्ती हेर्दा, जसले जे भने पनि, बालेन शाह अगाडि आउनुको कारणमा उनको पाँच वर्ष अगाडिदेखिको अठोट, भिजन, उनले गरेको नितान्त नौलो निर्वाचन अभियान र उनले स्वयंलाई गरेको ब्राण्डीङ्ग नै पर्दछन् । उनलाई यहाँसम्म पुर्याउनमा उनको गोप्य टिमको भुमिका पनि उत्तिकै छ ।
“गुरिल्ला मार्केटिंग” शैलीमा बालेनले आफुलाई एक ब्राण्डको रुपमा स्थापित गरे । मानिसहरुलाई आफ्नो प्रचार गरिरहेको थाहा नदिईकन गरिने मार्केटिंगलाई गुरिल्ला मार्केटिंग भनिन्छ । बालेन पनि त्यही गरे । सन् २०१७ मा उनले फेसबुकमा स्टाटस राख्दै शंखघोष गरेका थिए की यसपाली म चुनावमा भोट दिन्न तर आगामी ५ वर्षपछि म आफैँ उम्मेदवार बनेर स्वयंलाई भोट दिनेछु । यस कुरालाई धेरैले मजाकको विषय बनाए तर बालेन त्यसप्रति सिरियस थिए । उनले र उनको टोलीले निरन्तर ५ वर्षदेखि गरिरहेको पूर्व-तयारीले गर्दा नै चुनावमा बालेनको क्रेज यति धेरै बढेको हो ।
युवाहरु माझ इन्जिनियर बालेन्द्र शाह र्‍यापर बालेनका रूपमा परिचित छन् । उनले ह्वाईट हाउस कलेज नेपालबाट सिभिल इन्जिनियरिङ गरे । त्यसपछि, भारतबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरे । उनी नेपाल फर्केर इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्टका रूपमा काम गर्दै छन् । महाभूकम्प ०७२ पछिको पुनर्निर्माणमा उनले काठमाडौंभित्र र बाहिर आफ्नो पेसागत दक्षता सिद्ध गरिसकेका छन् ।
काठमाडौं शहरका बारेमा उनले आफ्नो घोषणापत्रमा राखेका विचारहरूले धेरैलाई छोएको छ र उनी अहिले युथ आईकनको रुपमा जताततै छाईरहेका छन् । बालेनका कुरा सिधा र तार्किक छन् । तपाईंलाई किन भोट दिने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै बालेनले भनेका छन्, “मलाई किन भोट दिने भन्दा, पहिला त म स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हो ।आई नो द मेकानिक्स अफ नेसन मेकिङ्ग ।” उनका सिधा र प्रष्ट विचारले काठमाडौँको जनतालाई तानेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, पुराना राजनैतिक अनुहारप्रतिको जनताको वितृष्णाले पनि बालेन अगाडि आएका हुन् । उनी स्वतन्त्र र युवा उम्मेदवार भएर मात्रै जीततर्फ अगाडि बढेका होइनन् किनभने त्यस किसिमका उम्मेदवार अरु पनि छन् ।
बालेन अगाडि आउनुमा उनको ‘करिज्म्याटिक’ व्यक्तित्त्व नै प्रमुख कारण हो । र त्यो व्यक्तित्त्व आफैँ बनेको होइन । ब्राण्डीङ्ग कन्सल्टेन्ट जनक सिंह धामी भन्छन्, “बालेनलाई मैले नजीकबाट नियाली रहेको छुँ । उनको राइजलाई मैले मार्केटिंग र ब्राण्डीङ्गको नजरबाट हेरेको छु । उनको व्यक्तित्त्वको एक एक आयामलाई ‘कोरियोग्राफ’ गरेर प्रस्तुत गरिएको छ । उनको बडी ल्यांगोएज, हिंडाई, बोल्ने तरिका, कपडा लगाउने तरिका (टिशर्ट कोट पाइन्ट ), झण्डा ओढेर हिँड्नु, मानिसहरुसँग घुलमिल हुने तरिका, इभन चस्मा नखोल्ने प्रवृत्ति, सबै पूर्व तयारीबाट आएका हुन्।”
उनले थपे, “अर्को कुरा उनी उम्मेदवारको रुपमा ‘फर्स्ट मुभर’को रुपमा देखिए । जब चुनाव हुन्छ भन्ने नै निधो थिएन र अन्य उम्मेदवार को हो भन्ने मानिसलाई थाहा नै थिएन, तब पनि बालेनले आफुँलाई जनतामाझ पुर्याईसकेका थिए । उनको मिडिया कभरेज पनि भव्य रह्यो । यस्तो कुनै मिडिया छैन जहाँ उनी पुगेका छैनन् ! बालेनले मिडिया मात्र प्रयोग गरेनन् । उनी टियु लगायत् विभिन्न कलेजमा पनि पुगेका थिए। र्याप ब्याटल भन्ने लाइभ शोमा पनि बालेन जज थिए । त्यसमा पनि उनी बीचमै बसेका थिए । यो सबै कुराले उनलाई एक मुख्य पात्रको रुपमा उभ्यायो । यसरी, उनी काठमाडौँबासीको मनमा पनि प्रमुख उम्मेदवारको रुपमा बसे।”
साथै, बालेन शाहलाई कलाकार, सेयर बजार सँग सम्बन्धित सबै संघ-संस्थाको पनि सपोर्ट रहेको थियो । चलचित्र क्षेत्रका हस्तीहरु खुलेरै बालेनको पक्षमा बोले । बालेनले शर्ट मुभि पनि खेलेका छन्, त्यसमा उनले बालेनले चुनाव हार्यो भने के हुन्छ भनेर एक चित्र देखाईएको छ जसले ‘फियर फ्याक्टर’ को रुपमा पनि काम गरेको ब्राण्डीङ्ग कन्सल्टेन्ट धामी बताउँछन् ।
काठमाडौँलाई बस्न योग्य, उत्तम र जीवन्त सहर बनाउन सम्भव छ भन्ने बालेनको स्पष्ट भिजनप्रति धेरै मतदाताहरू उत्साहित छन्। अन्य नगरपालिकाका तथा देशभरिकै मानिसहरूले सामाजिक सञ्जाल पोष्टहरूमा भनेका छन् कि उनीहरूले पनि बालेन पाएको भए बालेनलाई नै भोट दिन्थे। यस्तो किसिमको ऐतिहासिक कारनामा नेपालमा बिरलै देख्न पाइन्छ । कोहीकोहीले नानीमैया दाहालको पञ्चायतकालीन जितसँग दाँजेर हेरे पनि बालेनको उदय र शैली निकै आधुनिक देखिन्छ । बालेनको चुनावी प्रचार शैली र ब्राण्डीङ्ग नेपालको लागि नौलो हो ।
यस्तै, बालेनको यस नयाँ राजनैतिक शैलीको अनुसन्धान गरिरहेका अभियन्ता बिनोद पुरुष भन्छन्, “बालेनले भारतको आम आदमी पार्टीको केजरीवाल र अमेरिकाको रिपब्लिक पार्टीका डोनाल्ड ट्रंपको प्रचार शैली प्रयोग गरेको देखिन्छ । जसरी बालेनले सोसल मिडियामा पोस्टर र भिडियोहरु बनाए ती निकै रचनात्मक र जबर्जस्त छन् । उनलाई नायक फिल्मको अनिल कपुर र बाहुबलीको महेन्द्र बाहुबलीको रुपमा चित्रित गरियो- रीलमा महेन्द्र बाहुबली, रियलमा बालेन्द्र बाहुबली ! यसरी, उनलाई जहाँतहाँ एक हिरोको रुपमा र काठमाडौँ बनाउन सक्ने एक योद्दाको रुपमा उद्भव गराईयो । यस्तै प्रतिनिधि हो नागरिकले खोजेको भन्ने भाव आम नेपालीमा संचार भयो ।” त्यसैले, सुनिन्छ जहाँ लौरोको उम्मेदवार नै छैन त्यहाँ पनि लौरोमै छाप लागिरहेको छ रे !
स्वतन्त्र उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा आँधीबेहरी उठाए पनि नेपालका प्रमुख मिडियाले उनको मतगणना नहुँदासम्म उनलाई वास्ता गरेन। ‘बालेन फेनोमेनन’ सामाजिक सञ्जालको उन्माद मात्र होइन भन्ने भोटिङ अघिल्लो दिनमा प्रष्ट भयो। स्थापित पार्टीहरूसँग गठबन्धन भएका व्यक्तिहरूले पनि र्यापर अभियन्तालाई भोट दिएको बताएका छन्।
नेपालीहरू नयाँ सोच र नयाँ अनुहारका लागि ठाउँ भएको भविष्यतिर हेरिरहेका छन् । तर सञ्चारमाध्यम र तथाकथित बुद्धिजीवीहरूले लामो समयदेखि नागरिकको यो आकांक्षालाई बेवास्ता गर्दै मुख्य दलहरूबीच र भित्रको शक्ति सङ्घर्षको कभरेजमा अल्झिरहेका हुन्छन्। सुरुमा, स्थापित पार्टीहरूले बालेनप्रति युवाहरूको झुकावलाई विकृतिको रूपमा मात्र देखे – यसलाई ‘राजनीति नबुझ्ने’ युवाहरूले गरेको विरोध भोटको रूपमा खारेज गरे।तर, आम युवा नेपालीहरूले पूरानो घिनलाग्दो राजनीतिको ती अनुहारहरुलाई वास्तवमै रुचाउँदैनन्। पाए भने ती चेहराहरुलाई लौरो हान्न पनि बेर लाउन्नन् । अहिले भएको पनि त्यही हो, पुराना राजनैतिक हस्तीहरुले चोटिलो लौरो खाएका छन् ।